ỊHAZI IHE NGBANWU D-LINK DIR-620 - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ịhazi ihe ngbanwu D-Link DIR-620
Onye ntanetị Wi-Fi D-Link DIR-620
Na ntuziaka a, anyị ga-ekwu banyere otu esi ahazi redirepu wireless D-Link DIR-620 ịrụ ọrụ na ụfọdụ n'ime ndị na-ewu ewu na Russia. A na-echere nduzi maka ndị ọrụ nkịtị ndị chọrọ ịtọ netwọk ikuku na ụlọ ka o wee rụọ ọrụ. Ya mere, n'isiokwu a, anyị agaghị ekwu maka nsụgharị software DIR-620 nke ngwa ngwa, usoro nhazi niile ga-arụ ọrụ dịka akụkụ nke ngwa-ngwa ngwa ọrụ site na D-Link.
Lee kwa: D-Link DIR-620 firmware
Nlekọta nhazi ndị a ga-atụle iji:
Nwelite nwelite site na saịtị ọrụ D-Link (ka mma ime, ọ bụghị ihe siri ike)
Ịhazi njikọ L2TP na PPPoE (iji Beeline, Rostelecom dị ka ihe atụ .. PPPoE dịkwa mma maka ndị na-enye TTK na Dom.ru)
Wụlite netwọk ikuku, setịpụ paswọọdụ maka Wi-Fi.
Ngwudata ngwa ngwa na ngwa router
Tupu ịtọlite, ịkwesịrị ibudata nsụgharị ngwa ngwa ọhụrụ maka nsụgharị nke router DIR-620. N'oge ahụ, enwere ntụgharị atọ dị iche iche nke onye ntanetị a na-ere ahịa: A, C na D. Iji chọpụta nyochagharị nke onye ntanetị Wi-Fi gị, rụtụ aka na ihe nkwụnye ahụ dị na ala ya. Dịka ọmụmaatụ, eriri H / W Ver. A1 ga-egosi na ị nwere ngbanwe D-Link DIR-620 A.
Iji budata ngwa ngwa kachasị ọhụrụ, gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti D-Link ftp.dlink.ru. Ị ga-ahụ nhazi nchekwa ahụ. I kwesiri ịgbaso ụzọ /pub /Router /DIR-620 /Firmware, họrọ nchekwa nke kwekọrọ na nyochagharị nke onye rawụta gị na ibudata faịlụ ahụ na ntinye .bin, dị na nchekwa a. Nke a bụ faịlụ ọhụrụ ngwa ngwa.
Firmware DIR-620 na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị
Rịba ama: ma ọ bụrụ na ị nwere rawụta D-Njikọ Ntughari DIR-620 A na-eji ngwa ngwa 1.2.1, ịkwesịrị ibudata ngwa ngwa 1.2.16 site na folda ahụ Ochie (faịlụ naanị_for_FW_1.2.1_DIR_620-1.2.16-20110127.fwz) na nke mbụ melite site na 1.2.1 ruo 1.2.16, na naanị mgbe ahụ ka fọdụụụ ọhụrụ.
Onodu uzo nke onye nbipu DIR-620
Ịjikọta redire DIR-620 adịghị mfe: jikọọ eriri nke onye na-eweta gị (Beeline, Rostelecom, TTK - usoro nhazi ahụ ga-ewere ha maka ha) gaa n'ọdụ ụgbọelu Ịntanetị, ma jikọọ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri LAN (mma - LAN1) na njikọ kaadị netwọk kọmputa. Jikọọ ike.
Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịlele ntọala njikọ LAN na kọmpụta gị:
Na Windows 8 na Windows 7, gaa na "Ogwe njikwa" - "Network and Sharing Center", na nri na menu, họrọ "Ngbanwe nkwụnye mgbanwe", na ndepụta nke njikọ, pịa nri "Njikọ Gburugburu Mpaghara" ma pịa "Njirimara "ma gaa na paragraf nke atọ.
Na Windows XP, gaa "Ogwe njikwa" - "Njikọ Network", pịa aka nri "Njikọ Ebe Mpaghara" ma pịa "Njirimara".
Na oghe njikọ njikọ ị ga-ahụ ndepụta nke components eji. N'ime ya, họta "Internet Protocol version 4 TCP / IPv4" wee pịa bọtịnụ "Njirimara".
A ga - ahazi aha nke usoro: "Nweta adreesị IP na - akpaghị aka" na "Nweta adreesị nkesa DNS na - akpaghị aka." Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, gbanwee ma chekwaa ntọala ahụ.
Nhazi LAN maka D-Link DIR-620 rawụta
Rịba ama nhazi nhazi nke onye na-arụ ọrụ DIR-620: maka mmegharị niile na ruo mgbe ngwụcha nke nhazi, hapụ njikọ gị na Ịntanetị (Beeline, Rostelecom, TTC, Dom.ru) agbajiri. Ọzọkwa, adịghị jikọọ ya na mgbe ị na-edozi onye rawụta - onye rawụta ga-etinye ya n'onwe gị. Ajụjụ kachasị na saịtị ahụ: Intanet dị na kọmputa, ngwaọrụ ọzọ ejikọta na Wi-Fi, ma ọ bụrụ na enweghi Ịntanetị ọ na-ejikọta na eziokwu ahụ bụ na ha na-aga n'ihu na-agba ọsọ njikọ na kọmputa n'onwe ya.
Dware-Dware njikọ DIR-620
Mgbe ị jikọtara router ma mee ihe ndị ọzọ niile, mepee ihe nchọgharị ọ bụla na ụdị ntanetị dị na 192.168.0.1, pịa Tinye. N'ihi ya, ị ga-ahụ windo nyochaa ebe ịkwesịrị ịbanye ndabara D-Link nbanye na paswọọdụ - admin na admin na mpaghara abụọ. Mgbe ntinye ziri ezi, ị ga-ahụ onwe gị na mpaghara ntọala nke router, nke, dabere na nsụgharị nke femụwe arụnyere ugbu a, nwere ike inwe ọdịdị dị iche:
N'okwu abụọ mbụ, na menu, họrọ "System" - "Nwelite Ngwaọrụ", na nke atọ - pịa "Ntọala Ntọala", wee banye na taabụ "System", pịa aka nri ziri ezi n'ebe ahụ wee họrọ "Nwelite oru ntanetị".
Pịa "Chọgharịa" ma dee ụzọ nke faịlụ ntanetị eburu na mbụ. Pịa "Imelite" ma chere ruo mgbe arụmọrụ ahụ zuru. Dịka e kwuru na ihe edeturu, maka nyocha A na ngwa ngwa ochie ahụ, a ghaghị ime nkwalite ahụ n'ọnọdụ abụọ.
Na usoro nke imelite ngwanrọ nke onye na-ahụ ihe ntanetị, a ga-egbochi njikọ ya na ya, ozi "Page enweghịzi" nwere ike ịpụta. Kedu ihe ọ bụla mere, egbula ike redire maka nkeji ise - rue mgbe ozi nke ngwa ngwa na-aga nke ọma apụtawo. Ọ bụrụ na mgbe oge a gasịrị, ozi adịghị egosi, gaa na adreesị 192.168.0.1 onwe gị ọzọ.
Hazie njikọ L2TP maka Beeline
Mbụ, echefula na na kọmputa n'onwe ya njikọ ya na Beeline kwesịrị ịgbaji. Anyị na-aga n'ihu ịmepụta njikọ a na D-Link DIR-620. Gaa na "Ntọala Ntọala" (bọtịnụ na ala nke ibe ", na" Network "taabụ, họrọ" WAN ". N'ihi ya, ị ga-enwe ndepụta na njikọ njikọta. Pịa bọtịnụ" Tinye. "Na ibe nke gosipụtara, dee ihe mmemme njikọ ndị na-esonụ:
Ụdị Njikọ: L2TP + Dynamic IP
Aha njikọ: nke ọ bụla, na-atọ gị ụtọ
Na VPN ngalaba, dee aha njirimara na paswọọdụ nke Beeline nyere gị
Adreesị adreesị VPN: tp.internet.beeline.ru
Ihe ndị ọzọ fọdụrụ nwere ike ịhapụ agbanwe agbanwe.
Mgbe ịpịsịrị bọtịnụ nchekwa ahụ, ị ​​ga-apụta ọzọ na ibe ahụ na ndepụta nke njikọ, naanị oge a ka njikọ Beeline ọhụrụ ga-adị na steeti "Broken" na ndepụta a. Nakwa na nri aka nri ga-abụ ọkwa na ntọala agbanweela na a ga-azoputa ya. Mee ya. Chere 15-20 sekọnd ma megharia ibe. Ọ bụrụ na emezuru ihe niile n'ụzọ ziri ezi, ị ga-ahụ na njikọ ahụ dị ugbu a na steeti "ejikọta". Ị nwere ike ịga n'ihu ịmepụta netwọk ikuku.
Nhazi PPPoE maka Rostelecom, TTK na Dom.ru
Ndị ọrụ niile ahụ dị n'elu na-eji protocol PPPoE jikọọ na Ịntanetị, ya mere usoro nke ịtọpụta redire D-Link DIR-620 agaghị adị iche na ha.
Iji hazie njikọ ahụ, gaa "Ntọala Ntọala" na taabụ "Network", họrọ "WAN", nke ị ga-esi na ibe ahụ na ndepụta nke njikọ, ebe enwere njikọ IP dị omimi. Pịa ya na òké ahụ, ma na peeji na-esote, họrọ "Hichapụ", mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-alaghachi na ndepụta nke njikọ, nke bụ ugbu a efu. Pịa "Tinye." Na ibe na-egosi, dee ihe mmemme njikọ ndị a:
Ụdị njikọ - PPPoE
Aha - nke ọ bụla, na uche gị, dịka ọmụmaatụ - rostelecom
Na ngalaba PPP, tinye aha njirimara na paswọọdụ nke ISP nyere gị iji nweta Ịntanetị.
Maka onye na-enye TTK, dee MTU hà 1472
Ntọala njikọ Beeline na DIR-620
Mgbe ị debere ntọala ahụ, a ga-egosipụta njikọ ọhụrụ ahụ gbajiri agbawa na ndepụta nke njikọ, ị nwekwara ike ịhụ ozi n'elu na agbanweela ntọala ya na a ga-azoputa ya. Mee ya. Mgbe sekọnd ole na ole, chegharịa ihu na peeji nke njikọ na jide n'aka na ọnọdụ njikọ gbanwere ma jikọọ Ịntanetị. Ugbu a, ị nwere ike ịhazi ọnụọgụ abụọ nke ebe ntinye Wi-Fi.
Iji hazie ntọala netwọk ikuku, na peeji nke dị elu na taabụ Wi-Fi, họta ihe "Ntọala Ntọala". N'ebe a na mpaghara SSID i nwere ike ikenye aha ebe ikuku ikuku nke i nwere ike ichota ya n'etiti netwọk ikuku ndi ozo n'ulo gi.
Na "Ntọala Nche" nke Wi-Fi, ị nwekwara ike ịtọ paswọọdụ na ebe ị na-enweghị ike ịbanye, wee chebe ya na ịnweta ohere n'enweghị ikike. A kọwapụtara n'ụzọ zuru ezu iji mee nke a n'isiokwu "Otu esi etinye paswọọdụ na Wi-Fi."
O nwekwara ike ịhazi IPTV site na ntọala ntọala nke onye na-akwari DIR-620: ihe niile ị chọrọ bụ ịkọwa ọdụ ụgbọ mmiri nke a ga-ejikọta igbe ahụ.
Nke a mezigharị ntọala nke router na ị nwere ike iji Ịntanetị na ngwaọrụ ọ bụla nwere Wi-Fi. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ ihe na-ajụ ịrụ ọrụ, gbalịa ịmatakwu nsogbu ndị bụ isi mgbe ị na-edozi ụzọ na ụzọ iji dozie ha ebe a (lezienụ anya n'okwu ndị a - enwere ọtụtụ ozi bara uru).